Mbupu Fromgbọala Site USA na UK | Importgbọ M Mbubata
Mbupu Cargbọala Site USA na UK
Anyị bụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ mgbe anyị na-ebubata ụgbọ ala na UK, yabụ kama ịnwale usoro a naanị, anyị na-atụ aro iji ọrụ anyị iji mee ka ndụ dịrị gị mfe. Ọ bụrụ n’ị na-ebuga ụgbọ ala site na USA gaa UK, nkọwa zuru ezu n’okpuru bụ usoro anyị na-eso iji mee ka ị gaa n’ụzọ n’obere oge.
Inland USA Transportgbọ njem nke legbọ ala
Ndị nnọchi anya US anyị na onye anyị na ya rụkọrọ ọrụ afọ iri, ga-ahazi nchịkọta ụgbọ ala gị site na adreesị gị ma ọ bụ adreesị onye ị zụtara ya n'ime ụbọchị ole na ole ntinye akwụkwọ.
Anyị na-enye ọrụ ụgbọ njem emechiri emechi ma ọ bụ mepere emepe iji mezuo ihe niile achọrọ na mmefu ego. Mgbe ahụ, anyị ga-ebuba ụgbọala ahụ n’ọdụ ụgbọ mmiri kacha nso ma ọ bụ Oakland, Houston, Savannah ma ọ bụ New York.
Mgbe ụgbọ ala gị rutere ebe mbusa anyị, anyị ga -eji nnukwu nlebara anya tinye ya n'ime akpa mbupu ya. A họpụtara ndị nnọchi anya anyị nọ na USA n'ihi ahụmịhe ha na nlebara anya na nkọwa, yabụ ga -aga n'ihu idobe ụgbọ ala gị nke ọma maka njem ya.
Ọ bụrụ na ịchọrọ inwekwu mmesi obi ike, anyị na-enye mkpuchi mkpuchi nhọrọ nke na-ekpuchi ụgbọ gị ruo na ngbanwe ya zuru oke.
Mgbe ị na-ebubata ụgbọ ala site na America na UK, ị nwere ike mee nke a n'atụghị ụtụ isi ma ọ bụrụ na ịnwe ụgbọ ala ahụ opekata mpe ọnwa isii ma biri na mpụga EU karịa ọnwa 12.
Ule & Mgbanwe
Mgbe ị bịarutere UK, ụgbọ ala gị ga -enyocha ọtụtụ ule na mgbanwe iji hụ na ọ ruru ụkpụrụ okporo ụzọ UK.
Mgbanwe ndị a gụnyere mgbanwụrụ ọkụ ọkụ mgbaama n'ụgbọala ahụ. Ụgbọ ala ndị US rụpụtara na -enwekarị ihe ngosi agba dị iche iche, nke a na -etinyekarị n'ime ọkụ ọkụ breeki. Ha nwekwara akụkụ akụkụ agba dị iche iche na -enwe mgbe niile enweghị ihe ngosi akụkụ ma ọ bụ ọkụ ọkụ.
Anyị ga -atụgharị ụgbọ ala gị ka ọ bụrụ ụkpụrụ UK site na iji teknụzụ ọkụ ọkụ LED kacha ọhụrụ, na -enye anyị ohere ịmecha mgbanwe niile na obere mmetụta ịchọ mma.
Ụgbọ ala ndị ebubatara na USA nke na -erubeghị afọ iri ga -adị mkpa ka ha mee nnwale IVA tupu DVLA anabata nnabata. Dị ka naanị ụlọ ọrụ dị na UK nke nwere ụzọ nnwale IVA nke ejiri rụọ ọrụ nkeonwe maka ụgbọ ala ndị njem, nke DVSA kwadoro, oge ọ ga -ewe iji wuchaa atụmatụ mbubata a na -adị ngwa ngwa n'ihi na ụgbọ ala gị ekwesịghị ịhapụ saịtị anyị. anabataghị oge ichere gọọmentị.
Achọghị nnwale IVA maka ụgbọ ala karịrị afọ iri, agbanyeghị, ọ ga -adị mkpa ịgafe MOT yabụ ga -enwerịrị ike n'ihe metụtara ọkụ mgbaama, taya taya, nkwusioru na breeki, nke anyị ga -elele, ka ọ dabara. ka a na -anya ya n'okporo ụzọ UK.
Dika anyi na-acho ndi ahia anyi ka anyi nweta nke anyi Akaụntụ DVLA nke Akaụntụ M, na-agafe okwu ule a ga - anabata nnabata a ngwa ngwa karịa usoro ndị ọzọ.
Bupu ụgbọ ala si USA gaa UK enweghị ike ịdị mfe mgbe ị na-ahọrọ Mbubata Mgbọ M, ya mere kpọọ anyị taa na + 44 (0) 1332 81 0442 iji gbaa ọsọ otu anyị nwere ike isi nyere gị aka.